भुवनलाई साम्राज्ञीको प्रश्न : ‘आफूलाई इज्जतदार ठान्नेले प्रयोग गर्ने भाषा त्यहि हो’ ? « Pariwartan Khabar
२२ असार २०७७, सोमबार १८:२०
२२ असार २०७७, काठमाडौँ
केहीदिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा भैरहेको नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र भुवन केसीको विवाद अझै टुगिंएको छैन । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै एकअर्कालाई जवाफ दिइरहेका छन् ।
भुवनले साम्राज्ञीले आफ्नो मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम गरेको भन्दै कलाकार संघमा उनीविरुद्ध उजुरी नै दिए । अहिले फेरि साम्राज्ञीले सामाजिक सञ्जालमा निकै लामो स्टाटस लेख्दै भुवनलाई गतिलो जवाफ फर्काएकी छिन् ।
सोमवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले नव-प्रवेशी कलाकारले आफ्ना सुरुको संघर्षका दिनहरूमा भोग्नु परेको अदृश्य उत्पीडन, वास्तविक अप्ठ्याराहरु र आफूलाई ‘मै हुँ’ भन्ने निर्माताहरुको हेपाह प्रवृत्ति र दुर्व्यवहार बारेमा अभिव्यक्त गर्न पाइन्न र ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । यस्ता वास्तविकतालाई कसैले आफ्नो प्रतिष्ठाको बिषय बनाउनु बिडम्बना रहेको उनको भनाई छ ।
‘एउटा वरिष्ठ कलाकारले जुनियर कलाकारलाई होच्याएर सामाजिक सञ्जाल अनेकथरी भन्नु कहाँसम्म उचित हो रु के हो वरिष्ठ र प्रतिष्ठित व्यक्ति भनेको ? आफूलाई इज्जतदार ठान्नेले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भाषा त्यही हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गरेकी छन् । कुनै पनि व्यक्तिको बोलचालीले समाजमा उसलाई प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले बोल्दा विचार पुर्याउन उनको सुझाव छ ।
साम्राज्ञीको कुरामा कतिले समर्थन गरिरहेका छन् भने कतिले उनलाई गाली पनि गरिरहेका छन् ।
साम्राज्ञीको स्टाटस जस्ताको तस्तै-